China 6 mu 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD/TF kadhi slot (inogona kuverengwa panguva imwe chete) vagadziri uye vatengesi |Wellink
6 mu1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD/TF kadhi slot (inogona kuverengwa panguva imwe chete)
Muenzaniso: OS- KZ006B
PD100w iri kuchaja ichishanda isina kutadza simba.5Gbps high-speed data transmission;4K yakakwirira-tsanangudzo yekubatanidza kune akasiyana siyana ekuratidzira michina;aluminium alloy shell, kupfeka-resistant;SD/TF kadhi slot inogona kuverengwa panguva imwe chete;OTG basa rekuwedzera, wedzera mukana mutsva wenharembozha;kunze mbeva, keyboard, network kadhi kutamba mitambo.
HDMI 4K@30Hz， USB 3.0 * 2, Type-C PD 100w Pinda, SD/TF kadhi slot (inogona kuverengwa panguva imwe chete)
4K/HDMI, USB 3.0*2, Type-C PD 100w Pinda, SD/TF kadhi slot
• Supplies multimedia uye Ethernet ports yakabviswa kubva ichangoburwa Apple uye PC Laptops.
• Inokudza USB- C pachiteshi cheHDMI, 2 USB- A 3.0 BC1.2 zviteshi, Ethernet port, SD card reader, uye USB- C PD port.
• Kupfuura-nekuchajisa kunosvika 100W (kubvisa 12W pakushanda kwechiteshi) kunobvisa kukosha kwekusarudza pakati pekuwedzera kwechiteshi uye simba.
• Slim uye compact dhizaini inopa kufamba kuri nyore pakati penzvimbo dzekushandira uye inoderedza desktop clutter.
• 5 Gbps yebandwidth yekukurumidza kutumira data pakati pekombuta nemaperipheral.
• Wired Gigabit Ethernet yekubatanidza kune yakaderera-latency uye yakavimbika internet yekubatanidza.
• Zviteshi: 4K HDMI 1.4, 1x USB-C PD 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x Ethernet, SD 2.0 kadhi kuverenga.
Batanidza laptop yako kumidziyo yakawanda ne USB- C 6- mu-1 Multiport Adapter yedu.Iyi yese-mu-imwe mhinduro inowedzera komputa yako USB- C chiteshi kuita HDMI chiteshi, 2 USB- A 3.0 ports, Gigabit Ethernet port, SD kadhi muverengi, uye USB- C PD chiteshi, ichikupa madoko matsva malaptop abviswa munguva pfupi yapfuura. makore.
Uyezve, inotsigira kudarika-kuchaja kusvika ku100W, kubvisa kudiwa kwekusarudza pakati pekuwedzera kwechiteshi uye simba.Iyo diki, compact, uye yekufamba- yakagadzirira dhizaini yedu USB- C 6- mu-1 Multiport Adapter yakanakira avo vane akawanda nzvimbo dzekushandira, kana kune avo vari kutsvaga kukanganisa dhesiki ravo.
Inotsigira 4K resolution uye inosvika 5 Gbps yebandwidth yekukurumidza kufambisa data pakati pelaptop nemidziyo yeperipheral.
Mubvunzo:Ndinogona here kushandisa iyo ubs c pd slot kune rimwe basa rimwezve nekuchaja?senge ndika plug-in headset kuburikidza ne usb c?
Mhinduro:Hi, Ethan.Iyo USB-C PD chiteshi paBelkin AVC008 inongo tsigira passthrough kuchaja: 5V / 9V / 15V / 20V pa 5A (100W).
Mubvunzo:Kunodziya here?Ndinoshandisa maawa panguva.
Mhinduro:sezvo iri Bus powered pamwe kwete.
Mubvunzo:Iine 16in macbook intel chip.ndinogona kuvhara laptop yangu ndoratidza mamonitor maviri?kana ndikasiya laptop yakashama ndinogona kuratidza palaptop uye e.
Mhinduro:Mhoroi apo.Iyi Belkin USB-C hub haitsigire mbiri mbiri,Kana uri mumwe mubvunzo wako, tinoda kunzwisisa zviri nani pazviri.Ndokumbira ugovane zvimwe zvakawanda kuburikidza nechero yedu Social Media mapuratifomu, uye titumire chinongedzo kune ino positi, kuti titarise.
Mubvunzo:Iyo usb-c pd port inoshandiswa chete kuchaja, kana kuti ndingabatanidza usb-c peripheral pachiteshi ichi?
Mhinduro:Mhoro, David.Iyo Belkin AVC008 inokutendera kuti ubatanidze laptop yako kune akawanda madivayiri.Saka, unogona kugonesa uye kuchaja madhiraivha makuru, mafoni, uye mahwendefa ane USB-A 3.0 BC1.2 ports.
Mubvunzo:Izvi zvichashandisa kugona kwakazara kwesamsung dex kuburikidza nesamsung galaxy s9+?
Mhinduro:Mhoroi apo.Iyo Belkin CONNECT USB- C 6- mu- 1 Multiport Adapter haina kuedzwa kuti ienderane neSamsung DeX.Doki iri rakagadzirirwa kushanda nemalaptops anotsigira USB-C kubatana.
Mubvunzo:Izvi zvinoshanda here neiyo itsva 2021 imac 24 inch m1 chip?
Mhinduro:Hi Bernie C. Kunyange zvazvo Belkin AVC008 Multiport Adapter inopindirana nemamwe makombiyuta eM1 Apple, haina kuongororwa kushanda neMac 24 inch neM1 chip.
Mubvunzo:Iko usb 3.0 ports pasi inowirirana ne usb 2.0?
Mhinduro:USB 3.0 iri kumashure inoenderana ne USB 2.0 kazhinji.
Zvakapfuura: 5 mu1 Rudzi-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45
Zvinotevera: 6 mu1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45 (Support 1000MB wired network)